Olana Telo Mikiky Ny Filoha Nalaza Indray Mandeha Tao Chile · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2015 7:53 GMT
Ankehitriny , tsy maintsy miatrika ny 65% tsy fankatoavana azy i Michelle Bachelet, filohan'i Chile, indray mandeha nahazo ny laza faratampony. Sary avy amin'ny kaonty Flickr an'i Oscar Ordenes, nampiasàna ny lisansa Creative Commons
Navoaka voalohany tao amin'ny tranonkalan'ny NACLA ity lahatsoratr'i Consuelo Cortés Abad ity ary naverina navoaka etoana noho ny fifanarahna fifampizaràna votoaty
Efa indray mandeha isan'ny iray tamin'ireo mpitarika nalaza indrindra tao Amerika Latina i Michelle Bachelet, filoha Sosialista ao Chile, fa ny fe-potoam-piasany faharoa nitantanany no nitontongana ny lazany. Na aiza na aiza ao Chile, tsy misy olona miresaka politika ka tsy ahenoana tsikera mafy noho ny fitondrany. Araka ny voalazan'ny Foibem-pianaram-bahoaka (CEP) manana ny foibeny ao Santiago , tamin'ny faran'ny volana Aprily, 29% tamin'ireo namaly ny fitsapankevitra no nanaiky ny fitondrany, raha 56% no nitsipaka. 65% ny tsy fankasitrahana azony tamin'ny fitsapankevitra vao haingana indrindra. Efa avo dia avo ireo tahan'ny tsy fankasitrahana azy ireo raha oharina amin'ny an'ilay mpitahiry ny nentin-drazana, Sebastian Piñera, nodimbiasany.
Voafidy tamin'ny isam-bato 62% i Bachelet, noho izany inona no manazava ny fitotonganana amin'izao fotoana izao? Ny tsy fankasitrahana goavan'ireo vahoaka – maro amin'io izay azo nofantarina mialoha sy ideolojika – no avy amin'ny elatra havanana sy saranga afovoan'ireo tompona fandraharahana, ary avy amin'ny fanavaozana vao haingana natao tamin'ny hetra sy ny fanabeazana. Marina tokoa, ireo tolo-dalàna nanpidirina nandritra ny fe-potoam-piasany vaovao izay nifantoka tamin'ny fanabeazana, fanavaozan-ketra, ny asa ary ny fandraràna ny fanalan-jaza, dia voaporofo daholo ho tsy mamim-bahoaka. Saingy ny fisafotofoton'ireo tantara ratsy ara-politika izay nanome ireo lohateny vaventy nandritry ny volana vitsivitsy angamba no mety milaza betsaka kokoa azy ireny satria mamatotra betsaka azy amin'ny fototra afovoany-havia niaviany.
Fanavaozana ny hetra
Ny fanavaozan-ketra nankatoavina ny Septambra 2014 dia natao mba hampitomboana ny fampidiram-bola amin'ny hetra hahafahana mamatsy ny fanabeazana, ny fitsaboana ary ny asam-panjakana hafa. Mitsinjo tsara ny hampitomboana ny hetra aloan'ireo mpandraharaha io na dia mampihena ny tahan'ny hetra avo indrindra avy amin'ny 40% mankany amin'ny 35% aza. Manomboka amin'ny taona 2018, handoa hetra amin'ny tombom-barotra manontolo azony ireo tompona fandraharahàna, ary hitsahatra ireo fangatahana tsy hanoa hetra avy amin'ireo tombony azo ka naverina nampiasaina, amin'ny alàlan'ny Tahirimbolan'ny Tombombarotra Azo akàna Hetra (FUT). Rehefa nampiasaina ny FUT mba hanemorana ny fandoavana hetra, matetika mandritry ny fotoana tsy voafetra, milaza ny tsikeran'ireo mpomba ny tsena fa fitaovana iray nampiasaina io ho famporisihana ny fampiasam-bola goavana.
Milaza ireo mpifikitra amin'ny nentin-drazana ireo fa hiteraka tsy filaminana io fanovàna io, hitarika mankany amin'ny fitontongan'ny fampiasam-bola avy any ivelany. Na izany aza, nyfanadihadiana iray nataon'ny Kaomisiona Ara-Toekarena momba an'i Amerika Latna sy Karaiba (ECLAC) dia manamarika fa na eo aza ny fitambotsoran'ny toekaren'i Chile, nitombo 14% ny fampiasam-bola mivantana avy any ivelany ny 2014, raha toa ka latsaky ny 16% izany ho an'ny ambiny ao Amerika Latina. Tao anaty tafatafa iray, nanamarika i Alicia Bárcena avy ao amin'ny ECLAC hoe: “Tsy i Chile irery no firenena ao Amerika Latina nandàny ny fanavaozana ny hetra… Ireo mpampiasa vola vahiny dia avy any amin'ireo firenena izay nampihatra ny fanovàna tahàka izany ihany koa…”
Ireo tantara ratsin'ny Politika
Niha-sarotra ny toe-draharaha ho an'i Bachelet ny taona 2014 rehefa nirona nankany amin'ilay fantatra amin'ny hoe raharaha “Penta” ilay fanavaozana ny hetra sy ny fanaovana hosoka. Voampanga ho nanao kolikoly mba hanampy ireo mpandoa hetra 122 hahazo famerenam-bolan'ny hetra avy amin'ny FUT, tamin'ny fanaovana hosoka, ireo mpiasam-panjakana tao amin'ny Rafitra Anatiny Momba Ny Karama. Ho setrin'izany, nahazo vola kolikoly avy amin'ireo olona nahazo tombotsoa ireo mpiasam-panjakana ireo. Iray tamin'ireny i Hugo Bravo, lehiben'ny Penta Bank. Saron'ireo mpampanoa lalàna fa raha narahanamaso ireo mpiara-miasa amin'ny Penta Group, Alberto Délano sy Carlos Eugenio Lavin dia nilaza fandaniam-bola goavana noho izay tena nataon'izy ireo marina. Rehefa nesorina tamin'ny toerany i Hugo Bravo, dia naborany tamin'ireo mpampanoa lalàna fa natao ho an'ireo fanentanana ara-politika ireny tsolotra ireny – indrindra fa ireo avy amin'ny antoko havanana, ny Fikambanana Demaokratika Mahaleotena (UDI)
Ao Chile, na ara-dalàna aza ho an'ireo orinasa ny manome vola ho fampielezan-kevitra ara-politika, noeritreretina ho nomena tsy misy fitononana anarana izy io mba hialàna amin'ny fiantraikany amin'izay fanapahan-kevitry ny kandidà amin'ny ho avy. Nandritra ny fanadihadiana ny Penta, nahatratra filazàm-paharaisana (rosia) hosoka tamin'i Pablo Wagner, lefitry ny mpitantsoratra momba ny harena ankibon'ny tany an'i Sebastian Pinera ireo mpampanoa lalàna. Nitondra ho amin'ny raharaha irya anenjehana ilay orinasa mpitrandraka antsoina hoe Soquimich io, izay i Julio Ponce Lerou no tena mpampiasa vola ao, vinanto fahinin'i Augusto Pinochet. Voampanga ho namoaka rosia hosoka mba hamatsiana miaraka ireo fanentanana ara-politika roa, ny ankavanana (UDI) sy ankavia (ny Maro an'isa Vaovao eo amin'ny fitondràna), i Ponce Lerou.
Tantara ratsy iray hafa an'ny zanaka lahin'i Filoha Bachelet, Sebastián Dávalos, izay nanambady ny tompon'ny orinasa Caval, mpanao fanorenana. Noho ny maha-mpitantana tetikasa azy, nanomana drafitra hividy sombin-tany telo tao Machali any atsimon'i Chile, i Dávalos, miaraka amin'ny fahafantarana fa mety hitombo ny sandan'ny tany aorian'ny famerenana mamaritra ny toerana sy fampandrosoana vaovao ny tanàn-dehibe. Nila 6.500 tapitrisa dolara pesos niaingàna ny Caval, izay nampiasàny ireo fifandraisana ara-politika nananan-dry zareo mba hahazoana izany tamin'ny alàlan'i Andrónico Luksic, filoha lefitry ny “Banco de Chile” sady iray amin'ireo mpanakarem-be ao amin'ny firenena. Taty aoriana, namidin'i Dávalos sy ny namany 9.500 tapitrisa dolara pesos ilay tany, nampiditra ampaosy vola 2.500 tapitrisa dolara pesos afa-karatsaka.
Nanjary nalaza ny raharaha rehefa nitondra ny raharaha teny amin'ny fitsarana ny “consultant” iray noho ny tsy fandoavan'i Dávalos ny vola, nitarika fanadihadiana. Taorian'izay niala tsy ho talen'ny Sehatra Sôsialy-Kolontsaina tao amin'ny Fiadidiana ny Fitondràm-panjakana sy amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Antoko Sosialista i Dávalos.
Ho valin'ireny tantara ratsy ireny, nampanao tatitra iray avy amin'ny Kaomisiona Filankevitry ny Fiadidiana ny Fitondràm-panjakana, “Comisión Engel”, ny Filoha Bachelet, izay namolavola tari-dalàna mba hifehezana ny famatsiam-bola ireo fampielezankevitra ara-politika, ireo rohy misy eo amin'ny fandraharahana sy ireo politika, ireo ady tombontsoa, ary fitarihana hanao raharaha maloto sy kolikoly. Raha zara fa nijery ireo tolo-kevitra natao hampiharina ilay tari-dàlan'ny kaomisiôna, ny vahoaka kosa miandrandra ny hahita ny fampiharana ireny fanavoazana ireny.
Fanavaozana ny Fampianarana
Ireo fanavaozana ny fanabeazana nataon'i Bachelet, noho ny antony samihafa, no nahatonga fahatezerana ho an'ireo ankavanana sy ankavia. Nandroso hevitra ny hanavao ny ankavanana izay nisy fandraràna ireo tombontsoa, saram-pianarana, ary ireo fidirana arahan-tsivana amin'ireo sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa tsy miankina, izay mandray fanampiana amin'ny fanjakana. Saingy niteraka ihany koa tsy hafaliana teo amin'ireo mpianatry ny anjerimanontolo ary hetsi-panoherana niparitaka be ireo volavolana fanavaozana, niafara tamin'ny ratra mafy ho an'i Rodrigo Áviles, mpianatry ny Pontifice Universidad Católica, izay atahorana tokoa ny ainy ankehitriny noho ny herisetran'ny polisy. Hiova ny fanomerana làlana amin'ny fampianarana ary hatsangana ny biraon'ny mpanara-maso mba hiandraikitra ireo anjerimanontolo
Ny 21 May teo, nanome fampianarana ambony maimaim-poana sy feno ary mahomby, tsy misy fanampiana na fampitrosàna, ny filoha Bachelet ho an'ny maro tamin'ireo mpianatra marefo indrindra nisoratra anarana tamin'ireo anjerimanontolom-panjakana. Na izany aza, mitaraina ireo mpianatra avy ao amin'ny elatra havia fa ampahany vitsy amin'ireo mpianatra mananika ny 720.000 nisoratra anarana amin'izao fotoana izao amin'ny rafitry ny anjerimanontolom-panjakana no hahazo tombony amin'io fanavaozana io. Araka ny voalazan'ny ONG Educación 2020, ireo mpianatra izay mianatra amin'ny anjerimanontolo tsy miankina sy mahaleotena dia ho voahilika (vinaniana ho mpianatra 386.000), izay midika fa mpianatra miisa 386.000 fotsiny no hahazo tombontsoa.
Na izany aza, nisy fepetra hafa nampiana ihany koa: tsy maintsy mpianatra avy amin'ireo sehatra sahirana indrindra ara-toekarena eo amin'ny mponina ny 60%. Ireo fianakaviana tsy mampiditra afa-tsy 200.000 dolara pesos isan'olona ihany no mahazo, midika fa ny isan'ireo mpianatra rehetra izay hahazo ilay fanabeazana maimaim-poana ankehitriny dia manodidina ny 232.000 ihany. Ireo fiovàna ireo no tsikerain'ireo mpianatra mafy tokoa satria tsy misy azony atao hampitsaharana ny fikatsahana tombony eo amin'ny rafitry ny fampianarana, na hamaliany antsakany sy andavany ny fangatahana mikasika ny fanabeazana maimaim-poana.
Miely patrana sy tsy mitsaha-mitombo ny fahadisoam-panantenana amin'ny governemanta faharoa tarihan'i Bachelet. Mino ireo mpandraharaha madinika fa tsy hahazo tombony amin'ilay fanavaozana ny hetra izy ireo Mitarika fotsiny tsy fitokisana ny fitondrana amin'ny ankapobeny ireo tantara ratsy ara-politika vao haingana. Fanavaozana Fanabeazana no nodokadokafana, teo ambany teny faneva hoe “fanabeazana maimaim-poana ho an'ny rehetra” no nampiroboroboana ireo fanavaozana ny fanabeazana, saingy ny tena marina dia manampy monja ny vitsy an'isa amin'ireo mpianatra tena atao anjorom-bala. Andrasana ny hahitàna izay fomba hiatrehan'i Bachelet izany tsy hafaliana izany, sy na tsy afaka hiatrika marina ny kolikoly izay hatahorana hanimba ny fahafahany mitondra izy.
Mpianatra izay nahazo diplaoma tao amin'ny sekoly fianarana lalàna ao Santiago, Chile, i Consuelo Cortés Abad. Navoakan'ny gazety El Mostrado ny asa sorany momba ireo lohahevitra miresaka miralenta.